FILOHAM-PIRENENA TANY MAHAJANGA : Tsy mahazaka demokrasia, nisy ny fizaram-bola
Nanao rodobe nigadona tany Mahajanga ny filoham-pirenena sy ny ekipany ny faran’ny herinandro lasa teo. 16 avril 2018
Hanome voninahitra ilay lanonam-pitokanana ilay toerana fandraisam-bahiny goavana tany an-toerana no anton-dian’izy ireo tamin’io fotoana io. Niseho masoandro ary voaporofo tanteraka nandritra io diany tany Mahajanga io fa tsy mahazaka demokrasia ity fitondrana ity, indrindra fa ny mpitarika azy.
Raha ny zava-nisy tao an-tampon-tanànan’i Mahajanga tamin’io andro nahatongavan’ny filoham-pirenena tany an-toerana io dia naneho ny alahelony sy ny tsy fahafaliam-pony manoloana ny tsy fietezan’ny fandehan-draharaha maro misy eto amin’ny firenena ny mponina. Teo anatrehan’izany dia nisy tamin’izy ireo no nilanja sora-baventy nanambara io tsy fahombiazam-pitantanan’ny fitondrana ankehitriny io.
“Tsy mila jadona ary leo kolikoly ny vahoaka Malagasy”, izany ny soratra nirantiranty tamin’ny lalana. Raha nahita izany anefa ireo olona hery famoretana dia nisintona io sora-baventy io tamin’ireo vahoaka maro niandry teo amin’ny sisin-dalana Mazava-Huile mba tsy ho tazan’ny Filoha. “Efa tsy mahataitra ny olona intsony izany fihetsika izany fa ny fifidianana sisa no ahafahana miala izany”, raha ny nambaran’ireo vahoaka hatrany.
Notambazana 5000 ariary tsirairay ireo mpanotrona
Fihetsika tsy dia mahagaga ny maro loatra rehefa manao fitsidiham-paritra ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianiana ny fizarana vola atao ho an’ireo izay mitsena sy manotrona azy amin’ny hetsika ataony. Raha ny tao Mahajanga ny faran’ny herinandro teo, fotoana nitsidihan’ny filoha ny renivohitry ny faritra Boeny dia nisy ny fizarana vola 5000 ariary isan’olona mba hitsena sy hanotrona azy ireo vahoaka ireo. Ny sabotsy maraina, daty voatondro hahatongavan’ny filoha Hery ao Mahajanga dia efa nanomboka tonga nameno ny sisin’ny arabe ireo olona nokaramaina nomena vola hanotrona sy hanofahofa tanana azy rehefa mandalo.
Teo amin’ny tsenan’i Tsaramandroso ireo olona ireo no nasaina niandry nandritry ny fandalovany. Fotoana fohy taorian’ny fandalovan’ny filoha Hery Rajaonarimampiana dia efa tsy hita teo intsony ireo olona ireo.